निरन्तर हाम्रो अनुहारमा हिड्ने यी किरा के हुन् -यसो भन्छ अध्ययन – mero sathi tv
On २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १७:१४
तपाईं आफ्नो अनुहारमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ? कि अनुहारलाई फोहोर नै छोड्ने खालको हुनुहुन्छ ? तपाईं जस्तो खालको भएपनि तपाईंको अनुहारमा हजारौं कीरा सल्बलाइरहेका छन् ।
यो कुनै गफ हैन ।
अनुहारमा हिँड्ने कीराका सम्बन्धमा सन् १८४२ मै खोज भएको थियो । कानमा जम्ने फोहोरमा यो कीरा भेटिएको थियो । यो सूक्ष्मजीवको आठवटा खुट्टा हुन्छन् र यो माकुराको प्रजातिको हो ।
तर यो कीरा अनुहारमा पनि भेटिन्छ कि भेटिँदैन भनी प्रस्ट भएको थिएन ।
तर अहिले वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेअनुसार दुई प्रजातिका सूक्ष्मजीवहरू मानिसको अनुहारमा बस्न मन पराउँछन् । यिनीहरूको नाम डेमोडेक्स फोलीक्युलोरम र डी ब्रेभिस हो ।
यी दुवैको आकार कीराको जस्तै हुन्छ र यिनको खुट्टा पनि सानै हुन्छ । तर यिनीहरू माकुरो प्रजातिका कीरा हुन् ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यी कीराहरूले मलत्याग गर्न सक्दैनन् ।
जिन्दगीभरि यिनीहरू शरीरमै मल बोकेर बस्छन् र मरेपछि यिनीहरूको जिउ फुट्छ । त्यसपछि सबै ब्याक्टेरिया तपाईंको छालामा फैलिन्छ ।
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना स्टेट विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा मेगन थाइमसका अनुसार यी ब्याक्टेरियाहरूले अनुहारको छाला नै खाइदिन्छन् । यिनीहरूले छालाका मृत कोशिकाका साथसाथै अनुहारबाट निस्कने तेल पनि खान्छन् ।
हुन त यी सूक्ष्मजीवबाट तपाईंलाई कुनै हानि हुँदैन तर यिनीहरूले रोसेकीय नामक छालारोग ल्याइदिन्छन् । यो रोग लागेपछि अनुहारमा ससाना डल्ला आउँछन् र अनुहार रातो देखिन थाल्छ । यस्तो समस्या भएको मानिसको छालामा ब्याक्टेरिया १० गुणा बढी हुन्छ ।
किन हुन्छ पायल्स , कसरि बच्ने , के खाने के नखाने बिस्तृतमा जान्नुहोस्(शेयर गर्नुहोस् पिडितको भलो होस् )
सर्प र बिच्छीको बिष मार्नु देखि यी चमत्कारी काम गर्छ पुदिना (बिस्तृतमा जान्नुहोस् )